Aza matoky teny, matoky asa. - Anony - Quote Pedia
Latsaka ny teny tsy misy hetsika. Mety hipetraka isika ary mieritreritra ireo zavatra samihafa tiantsika hatao. Na dia tena zava-dehibe tokoa aza ny drafitra, saingy manan-danja kokoa aza ny fampiharana an'izany. Raha tsy tsia isika dia lasa teny tsy misy dikany ireo. Tsy hatoky ny olona tsy manao izay lazainy ny olona.
Rehefa manatanteraka izay inoanao ianao, dia misy fiatraikany, ary mahasoa ny fiainan'ny hafa izany. Izany fiantraikany izany dia mampahatsiaro ny olona hahatsiaro antsika, ary mahazo valiny isika. Noho izany, mifantoka amin'ny zavatra ataonao, arakaraka ny ifantohanao amin'ny famolavolana azy io.
Raha hitanao fa misy olona manome toky be dia tohizo foana izay ataony. Hanambara anao momba ny toetrany izany. Mora ny mahatakatra ny fihetsiky ny olona iray, araka ny zavatra nataony. Aza atokisana ireo izay tsy mahavita ny teniny.
Rehefa tonga ny olona iray dia tokony hanao izay fara heriny izy mba hahatratrarana azy. Eny, marina fa tsy ny fampanantenana rehetra azo tazonina noho ny tsy fahazoana antoka, fa ezaka no mampiseho sy manisa.
Raha vao mandrava ny fahatokisan'ny olona iray ianao dia saika tsy ho azony averina izany. Ny fahatokisan-tena dia sarotra ihany koa. Aza hadino ny teninao ary ampodio amin'ny hetsika mahomby. Manampy ny olona hatoky anao izany ary hanorina fifandraisana matanjaka.
Noho izany, mitandrema tena amin'ny fomba iatrehana ny fitokisana. Fantaro hoe iza no tokony hatokisana ary ahoana no hihazonana ny fitokisan'ny olon-kafa koa. Manampy anao hanana fanajana izany ary mamolavola ny tenanao ho olombelona iray azo itokisana.
Hetsiky ny mpandika teny
Aza matoky lahatsoratra
Teny manentana an'ny fahendrena
Fitiavana sy pitokisana
Quotes About Teny
Teny momba ny teny sy ny hetsika
Teny feno fahendrena
Teny hendry feno fahendrena
Teny manambara fahendrena
Teny amin'ny fahendrena
Ny olona sambatra dia tsy manana ny tsara indrindra amin'ny zava-drehetra, fa manatsara ny fananany fotsiny izy ireo. - Anonyme
Mba ho sambatra ianao, mila mahazo antoka ianao fa faly sy afa-po amin'ny zava-drehetra…
Ny finoana dia sahala amin'ny WiFi. Tsy hita maso, fa manana fahefana hampifandray anao ilainao. - Anonyme
Ny finoana dia sahala amin'ny WiFi. Tsy hita maso izany, nefa manan-kery mampifandray anao amin'izay ilainao.…
Ary aza dia ratsy fanahy amin'ny olona tahaka azy ihany izy. - Anonyme
Ny fomba itondranao ny olona no manapa-kevitra ny maha-olona anao! Miresaka betsaka momba ny…
Manomboka isan'andro amin'ny fankasitrahana. - Teny nindramina tsy fantatra anarana: